Margarekha अधिनायकवादी प्रवृत्तिको झझल्को आयो नेपाली कांग्रेसका नेता डा. रामशरण महत – Margarekha
अधिनायकवादी प्रवृत्तिको झझल्को आयो नेपाली कांग्रेसका नेता डा. रामशरण महत
नेपाली कांग्रेसका नेता डा. रामशरण महत पटकपटक अर्थमन्त्री सम्हालिसकेका व्यक्ति हुन्। उदारीकरणका वकालतकर्ता महत विषयविज्ञलाई अर्थमन्त्री बनाएर वामपन्थी सरकारले राम्रो काम गरेको बताउँछन्। उनी कांग्रेस कमजोर नरहेको दाबी गर्छन् । अनि अहिले कांग्रेसभित्र एकापसमा चलिरहेको जुहारी वास्तविकभन्दा महाधिवेशनकेन्द्रित भएको संकेत गर्छन् ।
प्राविधिकरूपमा मात्र नेपाल अल्पविकसितबाट विकासोन्मुख राष्ट्रमा जाँदा हामीले पाइराखेका सुविधा घट्छ । माल्दिभ्ससहितका अरु देशले पनि मानेका छैनन् । त्यसैले प्राविधिकरूपमा हामीले पास गर्न सक्थ्यौँ तर त्यो टिकाउ पनि हुनुपर्छ ।नागरिक दैनिकबाट
२० फाल्गुन २०७४, आईतवार १०:२२ प्रकाशित